यसकारण झन् बढ्यो आईपीएलको आगामी खेलमा सन्दीपको चान्स | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > खेलकुद > यसकारण झन् बढ्यो आईपीएलको आगामी खेलमा सन्दीपको चान्स
यसकारण झन् बढ्यो आईपीएलको आगामी खेलमा सन्दीपको चान्स
वैशाख ५, इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा दिल्ली डेयर डेभिल्स कोलकाता नाइट नाइडर्ससँग ७१ रनले पराजित भयो । खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै दिल्लीका ग्लेन म्याक्सवेलले आफूहरुको बलिङ कमजोर रहेको बताए ।
‘हाम्रो बलिङ लाइन मिसमास भयो, हामीले एउटै लयमा मिलाएर बलिङ गर्नै सकेनौँ’ म्याक्सवेलले भने, ‘उनीहरुले बिचको ओभरमा धेरै रन बनाए । हामीले सोचेर बलिङ गर्न सकेनौँ ।’
सोमबार राति कोलकाताकै घरेलु मैदानमा टस जितेर बलिङ गरेको दिल्लीले पहिलो ओभर मेडन गरेको थियो । अन्तिम ओभरमा तीन विकेट लिएर १ रन मात्र दिएको दिल्लीको मध्य क्रममा बलिङ खराब रहृयो । उनीहरुले बिचको १८ ओभरमा १ सय ९९ रन खाए ।
२ सय १ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीका लागि म्याक्सवेलले २२ बलमा ४७ रन बनाएका थिए । यस्तै रिसब पन्तले २६ बलमा ४३ रन बनाए । अन्यले खुलेर खेल्न सकेनन् । कोलकाताका स्पिन बलरहरु चलेको खेलमा दिल्लीले मध्यक्रममा तीब्र गतिका बलर लगातार खेलायो ।
कोलकाताका आक्रामक ब्याटिङ गरिरहेका एन्द्रे रसेलले तीब्र गतिको बलमा रन बनाइरहेका थिए । उनले १२ बलमै ६ छक्कासहित ४१ रन बनाए । उनको धेरै रन तीब्र गतिका बलर मोहम्मद सामीविरुद्ध आयो ।
दिल्लीले आफ्ना लेगब्रेक स्पिनर राहुल तेवाटियालाई ३ ओभर मात्रै बलिङ गरायो । पहिलो दुई ओभरमा कम रन खाएका उनले अन्तिम ओभरमा तीन विकेट लिएर एक रन मात्र दिए ।
यस्तोमा मध्यक्रममा उनलाई ल्याउँदा पिचले साथ दिने देखिन्थ्यो । तर, सहाब नदिमको ‘स्लो लेफ्ट आम’ बलिङ भने चल्न सकेन । उनले ४ ओभरमा ४३ रन खर्चिए ।
कोलकाताले १४ ओभर २ बलमा दिल्लीलाई १२९ रनमा अल आउट गर्दा स्पिनरहरु चलेका थिए । ‘हामीले हाम्रो बलिङमा छिटै बिचार गर्नुपर्ने देखिएको छ’ दिल्लीका सहायक प्रशिक्षक श्रीधरन श्रीरामले भने, ‘पञ्जावका राहुलले धुरन्धर हाने, राजस्थानसँग हामी ठीकै थियौँ ।
तर, कोलकातासँग त धेरै नै कमजोर देखियो ।’ उनले आफ्ना तीव्र गतिका बलरले केही भिन्न सोचेर आउनुपर्ने बताएका छन् । दिल्ली टिममा नेपाली युवा लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि आवद्ध छन् । तर उनले गएको ४ खेलमा एक खेल पनि खेल्न पाएका छैनन् ।
आईपीएलमा एउटा टिमले एक पटकमा चार जना मात्र विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउँछ । ज्यासन रोय, ग्लेन म्याक्सवेल, क्रिस मोरिस, टे्रन्ट बोल्ट, कोलिन मुन्रो, ड्यानियस क्रिष्टियन, एल्बी मोर्केल, कागिसो रबाडाजस्ता विदेशी खेलाडी भएको टिममा विदेशी खेलाडी भएकैले प्लेइङ ११ मा पर्न सन्दिपलाई कठीन छ ।
यसको अर्को कारण दिल्ली टिममा अमित मिश्रा, साहब नदिम, राहुल तेवाटिया, अभिषेक शर्मा, अखिल हेरवाडकर, महिपाल लोमरर घरेलु स्पिनर छन् ।
प्रचण्ड माथि खनिए ओली, सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन-‘कसैले आलोचना गर्ने ठाउँ छैन’
कर्मचारीलाई मन्त्री बिनाले भनिन्-‘तलब खाएपछि जनताको सेवामा लाग्नुस्’
विचरा ! नेपाल मोदीको स्वागतमा तल्लिन, उता भारतीय अवरोधले पानीट्यांकी नाकामा सड्दै ११ ट्रक चिया
गृहमन्त्रीकै आडमा हुन्छ तस्करी ! पढ्नुहोस्
विप्लप बन्द: पाल्पामा बम विस्फोट, स्थानीय बासिन्दा त्रसित !